Momba anay - SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD miaraka amin'ny mari-pamantarana CORENTRANS®, amin'ny maha mpamatsy matihanina ny fitaovana fanodinana vy sy vahaolana mitambatra. Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2010,CORENTRANS® dia nanolo-tena hanome milina metaly avo lenta sy vahaolana tafiditra. Ny vokatra lehibe dia ahitana ny Slitting Line, Cut-to-Length Line, Press Machine, Tube & Pipe Mill, ERW Tube Mill, stainless steel Pipe Mill, Tube farany famaranana fitaovana, tariby milina fanaovana sary, horonan-taratasy mamorona fitaovana, electrodes andalana, indostria sy ny faritra hafa & fanjifana.
Izahay dia nifantoka hatrany tamin'ny sandan'ny mpanjifa sy ny fangatahana, manolo-tena amin'ny fanomezana fitaovana sy tetikasa mifanaraka amin'ny kalitao sy ilaina mba hanampiana ny mpanjifa hampitombo ny tombony ary hamaha haingana ny olan'ny famokarana eo an-toerana. Nandritra ny fampandrosoana am-polony taona, ny mpanjifanay malaza any Afrika, Moyen Orient, Azia atsimo ary Amerika dia novolavolaina ho mpanamboatra mpifaninana indrindra eto an-toerana.
Ny tombony lehibe indrindra an'ny CORENTRANS®mifangaro amin'ny serivisy ara-potoana sy mahomby. Miantehitra amin'ny ekipa injeniera matihanina, ary hanome toro-hevitra mialoha momba ny varotra mialoha izahay, tatitra azo tanterahina, ary fisafidianana milina, ny milina tsirairay dia mivarotra rakitra iray tsy manam-paharoa ho an'ny mpanjifa rehetra mba hanomezana tolotra maharitra sy kojakoja fitehirizana.
Miorina any Shina, ny tanjontsika dia ny hahatsapa ny fanatontoloana ireo fitaovana sy vahaolana indostrialy avo lenta!
Misaotra tamin'ny sainao! CORENTRANS® manantena ny fahazoana tombony sy fiaraha-miasa maharitra!
Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana 6S hanafohezana ny tsingerin'ny asa, hampihena ny vidin'ny famokarana, hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana, hiantohana ny kalitaon'ny vokatra.
Mitantana tsara ny singa famokarana toy ny olona, ​​milina, fitaovana ary fomba amin'ny sehatry ny famokarana hanatsarana ny kalitaon'ny asa amin'ny ankapobeny. Fahatakarana feno ny filan'ny mpanjifa, fanomezana fandikana teknika matihanina ary famaliana fanontaniana ho an'ny mpanjifa.
Ny orinasa teknolojia avo lenta izay manao fikarohana, fampandrosoana ary fanamboarana milina fanodinana vy any Shanghai. Miaraka amin'ny vidiny mirary, fanaraha-maso kalitao eoropeana fenitra, serivisy 7 * 24 mandritra ny fotoana aorian'ny fivarotana, famatsiana faritra fanampiny.
Ny Masinina. Ny vahaolana. Ny fitaovana
Metaly avo lenta
milina & vahaolana tafiditra
Vidiny mety, fandefasana haingana, fihazakazahana ary famerenam-bola haingana,
ho an'ny vahaolana tsara indrindra!